Hitanay ny fidirana sy ny famoahana ny fizarana fahatelo amin'ny "The Mosquito Coast." | Avy amin'ny mac aho
Lahatsary iray manentana ny Apple TV + Mosquito Coast no manambara ny fanamby amin'ny fakana sary an-tsary ny fizarana fahatelo amin'ity tantara ity, mandeha amin'ny toerana tena izy. Tantara an-tsehatra izay milaza amintsika ny zava-niainan'ny fianakaviana amerikana iray izay mamakivaky ny Southwest and mankany Amerika Afovoany. Ao amin'ny teaser iray amin'ny fizarana fahatelo, "Everybody Knows This Is Nowhere," Apple dia mampiseho ny fanapahan-kevitra noraisin'ny famokarana haka sary ilay seho.
Mba hahatonga ny seho ho tena araka izay azo atao amin'ny fakantsary, nitsidika ny toerana tany Mexico ny mpilalao sy ny ekipa mba hisolo tena ny vondrona miampita ny sisintany ary hidina any amin'ny firenena. "Ity dia fitifirana mafy dia mafy", hoy i Justin Theroux, izay milalao Allie Fox. "Misy fomba iray handraisana an-tsehatra seho iray, avy amin'ny fiononan'ny Burbank. Fa raha tianao ho toy ny tany efitra io, ary hiala kely any Los Angeles. Hafa mihitsy izany.
Logan Polish, izay milalao Dina Fox, dia nilaza fa a traikefa nahafinaritra be. Ny famokarana dia nisafidy làlana iray izay niasa ho toy ny traikefa nitovy tamin'ny azo natao tamin'ny tena toetran'ireo mpilalao nilalao azy ireo. Nanomboka naka sary tany California izy ireo ary avy eo nifindra tany amin'ny tanànan'ny sisintany any Mexico mba haka sary ny ampahan'ny fizaran-tany efitra.
Tena mafy tokoa ny zavatra niainana satria Melissa George, izay milalao an'i Margot Fox, dia nitaraina fa «matetika dia manonofy ratsy mieritreritra an'io fizarana io. Nisy talen'ny talenta nahafinaritra anay nametraka anay tany amin'ny afobe, satria izany no nandalovany ary izany no nanapahan'izy ireo hevitra fa hataony aminay. "
Nanomboka ny 30 aprily lasa teo afaka mankafy amin'ny Apple TV + izahay amin'ity tantara ity izay dia zava-tsarotra mampihetsi-po izay mampiseho amintsika ny dia mampidi-doza avy amin'ny mpamorona idealista mahery vaika, Allie Fox (lalaovin'i Justin Theroux), izay nanongotra ny fianakaviany handeha ho any Mexico raha sendra nandositra tampoka avy amin'ny governemanta amerikana izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple TV » Hitanay ny fidirana sy ny famoahana ny fizarana fahatelo amin'ny "The Mosquito Coast."
Stella Low no filoha lefitry ny serasera vaovao an'ny Apple